Ady amin’ny fihanaky ny entana avy any ivelany Mbola mila ezaka be eto Madagasikara
APIPA sy ny kaominina Hanadio ireo lakan-drano tsy nisy mpikitika hatramin’izay
Nanatanteraka fivoriana handinihana ireo lamin’asa mahakasika ny fanadiovana goavana ireo lakan-drano eto amin’ny faritra iadidiany ny kaominina Antananarivo Renivohitra, omaly notronin’ireo rantsamangaika maro isan-tsokajiny.
Sampana mpamonjy voina Miatrika asa maro noho ny rotsak’orana
Maromaro sahady ireo tranga nosahanin’ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana tao anatin’ny dimy andro izao, fotoana nirotsahan’ny ranon’orana tsy an-kiato teto an-drenivohitra.
Vokatry ny orana Lasa fiveloman’ny olona ny haratsian’ny lalana
Mahatsikaiky ! Lasa fiveloman’ny olona tampoka ny haratsian’ny lalana ho an’ny eto an-drenivohitra. Ho an’ny etsy Andavamamba dia tsy maintsy mampiasa posy ireo mpandeha an-tongotra amin’ny sarany 200-300Ar ny olona iray.
« Chenille légionnaire » sy ny valala Niampy ny foto-drafitrasa hiadiana amin’izy ireo
50 000 hektara latsaka ny velaran-tany misy valala amin` izao fotoana izao eto Madagasikara. Hafahana miantoka tanteraka ny fifehezana an` izy ireo dia nahazo "Gîte d'étape" ho an'ny Ivontoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara (IFVM) sy ny fampitaovana ny trano vaovaon'ny laboratoaran'ny fitantanana ny fiarovana ny zava-maniry ny sampan`asa miaro ny voly eny Nanisana.
Olan-tokantrano Lehilahy 40 taona namono tena teny Tanjombato
Lehilahy iray indray no namono tena nitsoraka teny amin’ny tetezan’i Tanjombato omaly.
Sigara Niaka-bidy nanomboka omaly
Niaka-bidy avokoa ny vidin’ny sigara eny an-tsena nanomboka omaly zoma 11 janoary. Lasa 4.500 Ar ny iray fonosana raha 4.000 Ar teo aloha ary niakatra ho 250 Ar ihany koa ny singany iray.
Fampihenana ny entona karbona Mampiasa angovo avy amin’ny masoandro ny WWF
Nanao dingana be amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ka mampiasa izany ao amin’ny birao foibeny ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny zava-boahary na ny WWF.
Amin’izao ankatoky ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao dia tena maro ireo entana avy any ivelany mitobaka eran’ny tsena.
Mazava ho azy fa mamono hatrany ny vokatra vita Malagasy izany ary tena mampikaikaika ny mpamokatra sy ny mpandraharaha mihitsy. Ilaina ny fanamafisana sy ny fanohizana ny ady amin’ny fidiranan’ny entana be loatra avy any ivelany hoy ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana, Yvette Sylla nandritra ny fankasitrahana sy ny fanolorana vary sy vorona ary menaka sy siramamy ho an’ny mpiasa omaly zoma 21 desambra tetsy Ambohidahy. Ankoatr’izay dia nisaotra ny mpiasa izy ny amin’ny ezaka rehetra vita nandritra ny taona satria iaraha-mahita ny fisian’ireny vary simba sy ny fidangan’ny vidim-bary tato ho ato ireny izay niarahan’ny mpiasa nisalahy ny fijerena ny vahaolana. 900 mahery ny mpiasa nandray ny fanomezana ary amin’izao dia efa misitraka ihany koa ny fanatsarana ny birao ao an-toerana izy ireo. Fa tombony ihany koa ny nananganana ny rafitra mpanao fanadihadiana amin’ny lalàna momba ny fifaninanana (ANMCC) tao amin’ity minisitera ity. Natsangana izany hanao ny fanadihadiana sy ny fanangonam-baovao momba ny fandraharahana manodidina ny vokatra anankiray mba tsy hamono ny orinasa anatiny ka hampihena ny tombom-barotra miditra aminy.